Ofdị kpakpando: njirimara na nhazi | Network Meteorology
N’ime mbara igwe ahụ niile anyị nwere ike ịchọta ijeri kpakpando na ọtụtụ ụdị kpakpando nwere ụdị dị iche iche. A hụla kpakpando kemgbe ụwa, ọ hụghị kpakpando Ndị ọzọ. Ọ bụ isi mmalite nke ozi dị mkpa iji mata ihe ụwa niile dị ka ya, ọ bụ ihe mkpalite dị ka mmụọ nsọ maka ndị na-ese ihe n'ụdị dị iche iche ma were ya dị ka ụzọ maka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na ndị njem.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị kpakpando dị iche iche dị na njirimara ha.
1 Kedu kpakpando
2 Tydị kpakpando dịka ọnọdụ okpomọkụ na nchapụta ha si dị
3 Dị kpakpando dị ka ìhè na okpomọkụ
4 Okirikiri ndụ
Nke mbụ bụ ịmata ihe kpakpando dị na otú e si kee ha. Na mbara igwe, a kọwara kpakpando dị ka plasma spheroids nke na-enye ọkụ ma na-enwe usoro site na ike nke ike ndọda. Igwe kacha nso anyị nwere n’akụkụ anyị bụ anyanwụ. Ọ bụ naanị kpakpando dị na mbara igwe na-enye anyị ìhè na okpomọkụ, na-eme ka ndụ dịrị na mbara ụwa anyị. Anyị maara na ụwa mbara ala dị na mpaghara nke mbara igwe, nke bụ ezigbo anya maka ya.
Agbanyeghị, e nwere ọtụtụ ụdị kpakpando dị iche iche ma enwere ike ịkesa ha dịka njirimara ndị a:
Ọkwa nke okpomọkụ na ọkụ nke kpakpando nyere
Ogologo ndụ ha nwere
Ike ndọda nwere
Tydị kpakpando dịka ọnọdụ okpomọkụ na nchapụta ha si dị
Anyị ga-enyocha ihe bụ ụdị kpakpando dị iche iche dị adị na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ ha nwere na nhie ọkụ ha na-enye. A maara ọkwa a dị ka Harvard spectral classification wee nweta aha ya site na mmepe na Mahadum Harvard na ngwụcha narị afọ nke XNUMX. Nkesa a bu ihe ndi mmadu na-eji kpakpando. Obu ya kesara kpakpando nile dika okpomoku ha si di. Ejiri ụdị kpakpando asaa dị, O, B, A, F, G, K na M, nwere agba sitere na acha anụnụ anụnụ ruo ọbara ọbara.
E nwere ụdị ọkwa kpakpando ndị ọzọ dịka nhazi ọkwa nke Yerkes. Nhazi ọkwa a mechara karịa nke Harvard ma nwee ụdị nkọwa doro anya ma a bịa n'ịkọwa kpakpando. Nkesa a na-eburu n'uche kpakpando na oke ike nke kpakpando ọ bụla. Lee otutu kpakpando itolu nke ndia:
0 - perdị ọcha
Ia - Nnukwu ihe na-egbuke egbuke
Ib - Supergiant nke obere nchapụta ọkụ
II - nnukwu ihe Giant
III - Nnukwu
V - Dwarf isi usoro kpakpando
VII - White Dwarf
Dị kpakpando dị ka ìhè na okpomọkụ
Wayzọ ọzọ ịkesa kpakpando bụ okpomoku na ọkụ ha. Ka anyị lee ụdị kpakpando dị iche iche dịka njirimara ndị a si dị:
Hypergiant kpakpando: bụ ndị nwere mkpokọta ihe ruru otu narị okpukpu nke okpukpu nke anyanwụ anyị. Offọdụ n'ime ha na-eru nso usoro iwu uka ịgba nke bụ uru nke 100 M. 120 M bụ Ẹkot uka nke anyanwụ anyị. A na-eji ọ̀tụ̀tụ̀ a eme ihe iji kwe ka ntụnyere ka nnọọ mma n’etiti ịdị ukwuu na ịdị ukwuu nke kpakpando.
Supergiant kpakpando: Ndị a nwere oke n'etiti 10 na 50M na akụkụ gafere 1000 ugboro anyanwụ anyị. N’agbanyeghi n’anyanwu anyi buru ibu, o sitere na otu kpakpando di iche-iche.
Nnukwu kpakpando: ha na-enwekarị radius n’etiti 10 na 100 ugboro ugboro.
Subgiant kpakpando: ụdị kpakpando a bụ ndị e guzobere site na ngwakọta nke hydrogen niile dị na ntọala ha. Ha na-enwu gbaa karịa nke kpakpando ndị bụ isi. Nchapu ya di n'etiti kpakpando dwarf na nnukwu kpakpando.
Dwarf kpakpando: ha bụ akụkụ nke usoro usoro. Usoro a bụ nke gụnyere ọtụtụ kpakpando ndị dị na mbara igwe. Anyanwụ n’ụdị nke usoro mbara igwe anyị bụ kpakpando nke na-acha odo odo.
Subdwarf kpakpando: nchapụta ya dị n'agbata 1.5 na 2 ịdị ukwuu n'okpuru usoro isi mana ya na otu ụdịdị ahụ.
White dwarf kpakpando: Kpakpando ndị a bụ ndị fọdụrụ nke ndị ọzọ na mmanụ ụgbọ ala nuklia gwụrụ. Typedị kpakpando a kachasị ọtụtụ n’eluigwe na ụwa, tinyere dwarfs uhie. A na-eme atụmatụ na 97% nke kpakpando ndị ama ama ga-agafe n'akụkụ a. Site na mmalite, kpakpando niile agwụla n'ụkọ mmanụ ha wee bụrụ kpakpando na-acha ọcha.
Nhazi ọkwa ọzọ nke ụdị kpakpando dị iche iche na-adabere na ndụ ha. Usoro ndu kpakpando sitere na mgbe amuru ha site na igwe ojii buru ibu rue na onwu nke kpakpando. Mgbe ọ nwụrụ, ọ nwere ike ịnwe ụdị dị iche iche na ihe ndị fọdụrụ na kpakpando. Mgbe amụrụ ya, a na-akpọ ya protostar. Ka anyi lee ihe bu uzo di iche iche nke ndu kpakpando:
PSP: Isi na-ebute
SP: Isi usoro
GR: Onye buru ibu
AR: Igwe uhie
RH: alaka ụlọ
AKA: Nnukwu Alaka Asymptotic
SGAz: Anyi kacha acha anụnụ anụnụ
SGAm: Onye na-acha odo odo
VLA: Mgbanwe na-acha anụnụ anụnụ
Ozugbo kpakpando gwụchara mmanụ ọ nwere ike ịnwụ n'ụzọ dị iche iche. Ọ nwere ike gbanwee dwarf aja aja, supernova, hypernova, nebula planetary, ma ọ bụ gamma ray bursts. Ihe ndi ozo nke puru iche nke nwere ike ibute onwu nke kpakpando bu ndi ocha di ocha, oghere ojii na kpakpando neutron.
Ọ gaghị ekwe omume ịgụta kpakpando niile nọ n’eluigwe na-ahụ anya otu otu. Kama nke ahụ, a na-anwa ịgụ ụyọkọ kpakpando niile ọnụ iji mee atụmatụ na ọ̀tụ̀tụ̀ ụfọdụ banyere ihe ndị dị na mbara igwe ndị dị na ha. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na ọ bụ naanị n'ụzọ milky enwere kpakpando n'etiti 150.000 na 400.000. Mgbe ha gụsịrị akwụkwọ ụfọdụ, ndị na-enyocha mbara igwe kwuru na ọnụ ọgụgụ kpakpando niile dị na mbara igwe a ma ama ọ bụ ihe dị ka ijeri kpakpando iri asaa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị kpakpando dị iche iche dị na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Ofdị kpakpando